सांसद रामनारायण विडारी भन्नुहुन्छ : ख’र्च नसक्ने मन्त्रीहरुले सामूहिक राजी’नामा दिनुपर्छ…हेर्नुहोस् ।
काठमाडौं : रा’ष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण विडारीले बजेट खर्च नसक्ने मन्त्रीहरुले सामूहिक राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । विनियोजन विधेयक २०७७ मा मन्त्रालयगत शी’र्षकहरुमाथि छलफलमा लिँदै विडारीले असारमा ब”जेट पारित भइसके पनि साउनबाट फटा-फाट काम नगर्ने मन्त्रीहरुले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका हुन् ।
साउनबाटै काम सुरु गरी ब’जेट ख’र्च गर्न मन्त्रीहरुलाई के ले छेक्यो भन्दै उनले प्रश्न समेत गरे । उनले भने– ‘चाँडै विकास नि’र्माणका बजे’ट ठिक समयमा ख’र्च होस् भनेर असारमा ब’जेट पास हुन्छ । अनी साउनबाट फटा-फाट काम गरे हुनेनी । अनि मन्त्रीलाई काम गर्न केले छेक्यो ? कुन प्रेत आयो, त्याँ कुन भू’त आयो त्यो ?
किन चैत महिनामा मात्रै अख्ति’यारी आयो भनेर हल्ला गर्दै हिड्ने ? यसपाली त को’भिडले चैत खायो, बैशाख खायो, जेठ खायो, असार आयो । अब ख्वाम ख्वाम पैसा सि’ध्याउने काम गर्ने, कागज बनाउन थालियो । यहि सरकारले यहि पट’कबाट यस्तो काम गरोस् । यति पनि गर्न सकेन भने मन्त्रीहरुले सामूहिक राज’नीनामा दिए हुन्छ । त्यति पनि गर्न नसक्ने । अरुथोक केही गर्नुपरेन, ब’जेट छुट्टयाएको छ । सं’सदले पास गरेको छ ।
अनि त्यसपछि चैत महिनामा अ’ख्तियारी, फागुनमा अ’ख्तियारी । किन त’लब खा”एर बसेको ? मन्त्रीले यो कुरा विचार गरुन् ।’वि’पक्षी दल’हरुले समेत ब’जेट पुगेन भनेर भन्ने तर मन्त्रालयको ख’र्च १ सय रुपैयाँ राख्नुस् भनेर भन्ने प्रवृ’तिले विकास हुन नसकेको उनले बताए । उनले भने– ‘वि’पक्षी झन त्यस्तै । पैसा यहाँ नि बढाउन, यहाँ नि पुगे’न त्यहाँ नि पुगे’न भन्छ ।
अनि ब¥जेट चाँही १ सय रुपैया मात्रै रा’खियोस् यो मन्त्रालयमा भन्छ । १ सय रुपैयाँ भन्छ अनि यो नि बनाइदे उ नी बनाइदे ब’जेट पुगेन भन्छ । वि’पक्षी यस्तै सत्ता उस्तै । अनि देश कसरी वि’कास हुन्छ ?’ रा’ष्ट्रियसभाबाट जति सु’झाव दिएपनि ब’जेटमा कुनै परिवर्तन नहुने कुराको विरो’ध गर्दै उनले बजे’ट सं’शोधन गर्दैमा सरकार तल’माथि नहुने बताए ।
बेलायत र अमेरिका लगायतका देशमा पनि बजेट सं’शोधन हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले सबैतिरबाट आएका सु’झावहरुलाई आ’त्मसाथ गरी ब’जेट सं’शोधन गर्न सरकार डरा’उन नहुने बताए । उनले भने– ‘यत्रो छलफल गर्यो, यत्रा दिनको तल’ब भ’त्ता ग्वा’म ग्वा’म खायौँ । अनि ब’जेट चाँही सरकारले जे ल्यायो त्यही एक रुपैयाँ नी परि’वर्तन हुँदैन् ।
यस्तो पनि कहिँ हुन्छ ? यो छलफल ना’टक किन गरेको ?’ अ’र्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले प्रति’निधिसभामा दैनिक ख’र्च धान्न गाह्रो भएको भन्दै दिएको अभिव्यक्तिको उनले आलो’चना गरे । उनले भने– ‘म १५, १६ वर्षको थिए । १६ हजार ऋ’ण छ, नेपालीको टाउ’कोमा भनेर भा’षण गर्थे । त्यो ऋ’ण त अहिले पनि बाँकी नै छ रे, ३४ हजार पुग्यो रे ।
कस्तो सरकार चलाएछन् ? कस्तो ऋ’ण ति’रेछन् ? अब त ४० अ¥र्ब ख’र्च रे १५ अ¥र्ब आ’म्दानी रे । अनि त’लब पनि विदेशीसँग मा’गेर खाने रे । अनि हामी पर’लम्बी हुँदैनौ भनेर धा’क लगाउने ?’ सांस’दहरु नीति नि’र्माण भन्दा पनि ब’जेटकै पछि कुद्ने गरेको उनले बताए । देशका लागि ब’जेट र नीति नि’र्माण गर्नुपर्ने भएपनि आफ्नो क्षेत्रका लागि कहाँ बजेट पाइन्छ भनेर सुँध्दै हि’ड्ने प्र’वृतिले देशको वि’कास नभएको उनले बताए ।
सरकारले सरकार ढ’ल्ने ड’रले सां’सदहरुलाई विभिन्न नाममा पैसा बाँडेको उनले आ¥रोप लगाए । उनले भने– ‘सांसदहरुले वि¥रोध गरे सरकार ढा’ल्छ रे भनेर कहिले ६ करोड डा’इरेक्ट, कहिले घु’माएर ४ करोड, अनि बाटो-घाटो भनेर १०, ८ करोड हाल्दिने काम मन्त्रीले गर्यो । यसबाट देश वि’कास हुँदैन । त्यसैले ब’जेट मा’र्न र ब’जेट पार्न हुँदैन् ।’
पछिल्लो समय स’डकमा को’रोना महामा’री नि’यन्त्रणका लागि भएको ख’र्चको वि’वरण सा’र्वजनिक गर्न माग गर्दै भइरहेका प्र’दर्शनलाई ल’क्षित गर्दै उनले मन्त्रा’लयलाई दैनिक ख’र्च वेव’साइटमा सा’र्वजनिक गर्न आ’ग्रह गरे । उनले भने– ‘कोभिड–१९ मा कहाँ कति क’सरी ख’र्च भयो भनेर सड’कमा नारा लगा’उनुपर्छ ? दिनदिनै को वेव सा’इट छ क्यारे ढ्या’क्क हाल्नु ।
दिनदिनैको ख’र्च र आ’म्दानी । यति ख’र्च भयो, यति आम्दा’नी भयो, यति डोने’शन प्राप्त भयो भनेर निकाल्दा हुँदैन् ? त्यो नि’काल्न कसले छेक्यो हाम्रा मन्त्री ज्युलाई ? अनि सड’कमा नारा लगाउन पर्ने वि’पक्षिले । के–के न भने भनेर फु’र्ति लगाउने । मैले त त्यो १० अर्बको पैसाको हि’साब मागे भनेर फु’र्ति लाउने त्यसो किन ग¥या । राटोपाटी